Semalt - वेब सामग्री निकाल्न चाहनुहुन्छ? एक नयाँ डाटा एक्स्ट्रैक्टरले तपाइँको कामको लागि सुविधा पुर्‍याउँछ
के तपाईं जटिल र गतिशील वेबसाइटहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? अब, AJAX वा जाभास्क्रिप्ट पृष्ठबाट डेटा स collect्कलन र भण्डारण गर्न सम्भव छ। स्टीभन सेलफको Scraper नेट मा एक उत्तम वेब निष्कर्षण उपकरण मध्ये एक हो। यसले मेटाडाटा, छविहरू, र पाठहरू तपाइँको हार्ड ड्राइभमा सहज रूपमा डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। यसले मुख्यतया परिष्कृत र गतिशील साइटहरूलाई लक्षित गर्दछ र कुनै समय बिना उपयोगी जानकारी निकाल्छ। स्टीभन सेल्फको स्क्रेपरले एपीआईहरू, र ROM पार्सर्स सही परिणामहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ।
छविहरू स्क्र्याप गर्नुहोस् र उपयोगी डाटा प्राप्त गर्नुहोस्:
धेरै जसो वेब स्क्र्यापरहरूले छवि र भिडियोहरू राम्रोसँग स्क्र्याप गर्न सक्दैन। ती उपकरणहरू जस्तो नभई, स्टीभन सेलफको स्क्र्यापरले तपाईंको छविहरूको ख्याल राख्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार स्क्र्याप गर्दछ। एक पटक PNG र JPG फाईलहरू सकृय भएपछि, स्टीभन सेलफको Scraper तिनीहरूलाई छुट्टै छवि फोल्डरमा बचत गर्दछ वा तिनीहरूलाई अफलाईन प्रयोगको लागि तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्दछ। यसको नि: शुल्क संस्करणको साथ, तपाईं पाँच हजार छविहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको भुक्तान गरिएको संस्करणले तपाईंलाई केहि मिनेटमा १० हजार भन्दा धेरै छविहरू स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तस्वीर प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनुपयुक्त छ भने, उपकरणले यसलाई तत्काल झण्डा लगाउँदछ र तपाईंलाई वेब निष्कर्षण परियोजनामा लैजानबाट रोक्छ। यो इन्टरनेट मा तपाइँको सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
सबैका लागि उपयुक्त:
स्टीभन सेल्फको स्क्र्यापर प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, वेबमास्टरहरू, विद्यार्थीहरू, डाटा विश्लेषकहरू, र अन्वेषकहरूको लागि उपयुक्त छ। एक विद्यार्थी वा शिक्षकको रूपमा, तपाईं यसलाई ईबुक र जर्नलबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ParseHub को लागी एक राम्रो विकल्प:
ParseHub एक प्रसिद्ध वेब स्क्र्यापि tool उपकरण हो जुन अहिले सम्म २ मिलियन वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गरी सकेको छ। यसको विपरित, स्टीभन सेलफको खुरचुरो नयाँ उपकरण हो जसले केही हजार वेब पृष्ठहरू मात्र स्क्र्याप गरेको छ। अझै, स्टीभन सेलफको खुरचु पार्सेहबको लागि राम्रो विकल्प हो जुन एक पटकमा बहु डेटा निकाल्ने कार्यहरू गर्न सक्षम छ। Import.io र ParseHub विपरीत, यो उपकरणले तपाईको डेटा सेकेन्डमा स्क्र्याप गर्दछ र छोटो पुच्छर र लामो पुच्छर कुञ्जी शब्दहरूको स्थिति बदल्दैन। यसको मतलब तपाईले परिष्कृत साइटहरुबाट डेटा स्क्रयाप गर्न सक्नुहुनेछ गुणवत्तामा सम्झौता नगरी र तपाईको लक्षित कुञ्जीशव्द स्थिति लाई अवरोध गर्न आवश्यक पर्दैन।
प्रणाली आवश्यकताहरू र समर्थित प्लेटफर्महरू:
स्टीवन सेल्फको भत्काउनका लागि सिस्टम आवश्यकताहरू अटारी (२00००, 52२०० र 78 78००), एनईसी) टर्बो ग्रैक्स १ 16 / पीसी इञ्जिन, र सुपर ग्रैफक्स), र निन्टेन्डो (निन्टेन्डो फैमिकम डिस्क प्रणाली, सुपर निन्टेन्डो, निन्टेन्डो गेम ब्वाइ, र निन्टेन्डो भर्चुअल ब्वाय) हुन्।
स्टीभन सेल्फको स्क्रेपर विन्डोज, लिनक्स, म्याक ओएस, र रास्पबेरी पाईसँग उपयुक्त छ। तपाईं यो उपकरण डाउनलोड र सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ रेट्रोपी स्क्रिप्ट सेटअपको साथ। उपकरण एक समय मा विभिन्न वेब कागजात स्क्यान गर्न सक्षम छ। यसले HTML फाइल र PDF कागजातहरूलाई पाठमा रूपान्तरण गर्दछ। तपाईं यसको प्रयोग गर्न चाहानु भए जति वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
पठनीय र स्केलेबल डाटा प्रदान गर्दछ:
स्टीवन सेल्फको खुरचुरो को एक प्रमुख विशेषता यो हो कि यो स्केलेबल र पठनयोग्य डाटा प्रदान गर्न को लागी सुनिश्चित गर्दछ। अन्य समान डाटा स्क्र्यापिंग सफ्टवेयरको साथ, तपाईं निश्चित र विश्वसनीय परिणामहरू प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहुन्न। तर स्टीवन सेल्फको स्क्र्यापरको साथ, तपाईं मात्र पढ्न योग्य सामग्री पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईंको हार्ड ड्राइभमा सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरणले छिटो परिणाम प्रदान गर्दछ र एक मिनेटमा १०० वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरू सम्मिलित गर्न सक्छ। यसको अलावा, यसले तपाईंको कागजातमा सबै साना मामूली हिज्जे र व्याकरण त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ।